Fiarovana ny lozisialy sy ny mpanjifa amin'ny mpisandoka? | Martech Zone
Alarobia, Oktobra 4, 2006 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Mety ho ny sasany amin'ireo fihodinana ratsy indrindra novakiako momba ny Piracy Software!
Vakio ny lahatsoratra: Sehatra fiarovana an'ny lozisialy Microsoft. Ratsy tahaka ny lalàna Tia Tanindrazana io! (AKA: Mila miaro ny fahafahanao izahay, ary ho tia tanindrazana ianao raha mamela ny sasany amin'ny fahalalahanao hahafahantsika miaro ny fahafahanao…. Huh?). Tokony ho nanao memo anatiny fotsiny i Microsoft:
Sehatra fiarovana Microsoft tombony: mitazona ny rindrambaiko lafo sy tombony amin'ny tampon-trano!
Mino mafy aho fa ny ankamaroan'ny olona dia hangalatra ihany rehefa tsy maintsy manao izany. Azo antoka fa betsaka ny olona mangalatra noho izany - saingy tsy mino an'izany ny maro an'isa. Heveriko fa miteny ho an'ny olona maro aho rehefa milaza izany Microsoft Software IS lafo. Ary koa, tsy mbola nanantena antenaina mihitsy aho mandrakizay mahazo fanohanana. Ary - Fantatro fa tsy maintsy miankina amin'ny fanavaozana aho mba hihazonana ny lozisialy. Ary - Fantatro fa tsy maintsy mividy sy mametraka rindrambaiko hafa aho hiarovana ny rindrambaiko Microsoft amin'ny fanafihana manimba.
Ny teny hoe "sandoka" dia tsy fehezanteny marina. Tsy sandoka ilay rindrambaiko… ny boaty sy ny CD dia mety… fa ny rindrambaiko no tena lozisialy Microsoft. Ny ady amin'ny rindrambaiko adika sy apetraka tsy ara-dalàna TSY miaro rindrambaiko ary tsy miaro ny mpanjifa. Ireo mpanjifa izay tia ny vokatrao dia ho vonona handoa izany vokatra izany foana. (Nandoa XP sy Office XP aho)
Tena tsy manam-pahalalana sy tsinay ny fihodinan'ny Microsoft hamoaka marika banga toy izany. Misy mino ve fa hafatra marina izany? Io no olana amin'ny Marketing ankehitriny, tsy mino an'izany ny olona satria tsy mampino.
4 Okt 2006 amin'ny 12:22 PM
"Mino mafy aho fa ny ankamaroan'ny olona dia hangalatra ihany rehefa tsy maintsy manao izany."
Tena te-hino anao aho. Tena te-hino aho fa ny mofo izay angalarina dia ny famahanana ny fianakavian'ilay mpangalatra noana fotsiny. Tena tiako ho marina izany…
Saingy, amin'izao andro iainako izao dia mino aho fa ny rindrambaiko, rindrambaiko an'iza n'iza, dia hita amin'ny alàlan'ny solomaso misy setroka nandritra ny taona voalohan'ny Windows Windows 3. zavatra iray… TSY ny fandikana azy io dia marina (!!!) fa ny Microsoft kosa tsy nanao "toa tsy mampaninona azy" ny maka tahaka. (Tena tsy marina fa izay no fahitana.)
Tsy mino aho fa i Joe Average dia mahay manavaka tsara ny asa mafy ataon'ny mpandahatra programa voafantina, manandrana mitady fivelomana, ary ireo mega-business-monoliths izay manandrana mitady vidiny sahaza ny vokatr'izy ireo. Raha izany dia tsy misy atahorana loatra ny an'i Joe izay rindrambaiko "ampiasainy" amin'ny lamaody ara-dalàna na tsy ara-dalàna.
Ity dia resaka fomba fijery ary lesoka amin'izany. Tokony handoa ny programa rehetra ampiasaintsika isika. Tsy mino fotsiny aho fa mitazona fahitana mitovy amin'izany i Joe Average.
azafady… ny 0.02 $ fotsiny
4 Okt 2006 amin'ny 1:38 PM
Tsy ilaina ny fifonana, William! Heveriko fa akaiky kokoa ny fifanarahana izahay fa tsy araka ny fieritreretanao azy.
Heveriko fa mendrika hiadian-kevitra ny adihevitra. Manampy orinasa iray rindrambaiko ve ny piraty amin'ny fizarana rindrambaiko amin'ny fomba mahomby? Azoko antoka fa ho an'ny sasany izany.
Angamba tsy mahay mandinika aho fa handoa ny olona satria mandoa rindrambaiko. Tsy maintsy ekeko fa nampiasa rindrambaiko piraty aho ary avy eo nandoa azy io koa. Indraindray dia tena voafetra ny fitsarana ary mbola tsy azoko antoka hoe mendrika ny vola ve izany.
Ao am-poko aho dia mino fa ny vidin'ny fanaraha-maso sy ny fangatahana dia takiana. Amin'ny alàlan'ny familiana sy famerana izany amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso izay manery olona iray hividy, heveriko fa mangataka olona hangalatra azy ianao.
Ohatrinona ny vidin'ny Windows? $ 400? $ 100? $ 10 / mo? Fa maninona no lafo kokoa ny vola amin'ny solosaina vaovao (OEM) fa tsy ny solosaina nohavaozina? Heveriko fa ny firafitry ny vidiny dia misy lesoka voajanahary, ary i Microsoft dia mandany vola be amin'ny Piracy fa tsy hanao ny rindrambaiko mora vidy fotsiny.
5 Okt 2006 amin'ny 8:56 PM
Nanantena aho fa hisy hafa hiditra amin'ny laharana eto… saingy indrisy… efa nanomana valinteny lava aho ary nandefa izany ihany tao amin'ny Ho valintenin'i Doug Karr…